यदि मँ आईप्याड २, or वा have छ, के मैले एक प्रो को लागी मेरो उपकरण नवीकरण गर्नु पर्छ? | म म्याकबाट हुँ
यदि मँ आईप्याड २, or वा have छ, के मैले एक प्रो को लागी मेरो उपकरण नवीकरण गर्नु पर्छ?
Applelised | | आईप्याड
यो एक प्रश्न हो जुन एप्पल ट्याब्लेटको पहिलो पुस्ताका धेरै प्रयोगकर्ताहरूमा देखा पर्न थाल्छ। म आफैंमा आईप्याड had थियो अन्तिम क्रिष्टमस सम्म मैले एयर २ मा हाम फाल्ने निर्णय गरें र मलाई कुनै पश्चाताप छैनवास्तवमा, मलाई लाग्छ कि यो एक स्मार्ट निर्णय थियो, र अधिक यति धेरै आईओएस of को आगमन संग, जसले सबैभन्दा हालको मोडेलको विशेष कार्यको साथ राम्रोको लागि प्रयोगकर्ताको अनुभव परिवर्तन गर्‍यो।
आजको प्रश्न हो: के मैले मेरो पुरानो आईप्याड नविकरण गर्नु पर्छ? म आज यो गर्ने कामका पक्षधर र विपक्षहरूको बारेमा कुरा गर्ने छु, कि हामी एक महत्त्वपूर्ण भनाइको नजिक छौं र धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई सोध्छन्।
1 पीसीको भविष्य: आईप्याडहरू
2 मैले कुन नयाँ आईप्याड किन्नु पर्छ?
3 यदि मूल्य कुञ्जी हो भने उत्तम एयर
पीसीको भविष्य: आईप्याडहरू
यो मेरो लागि अलि बढि बढाइएको जस्तो देखिन्छ, तर यो सत्य हो कि एक साधारण व्यक्तिले प्रत्येक आधारभूत कार्यको लागि कम्प्युटरमा जाँदैन, जस्तै सामाजिक नेटवर्कहरू हेर्ने, डिजिटल पढ्ने, ईमेल जाँच गर्ने, समाचार, सञ्चार अनुप्रयोगहरू र कागजातहरू सम्पादन गर्ने र केहि रेकर्डहरू। ती सबै चीजहरूको लागि हुनसक्छ यो अधिक सहज छ एक उपकरण जुन १००% पोर्टेबल हो, हामी एक स्पर्श तरिकामा हाम्रो औंलाहरूसँग अपरेट गर्न सक्दछौं र त्यो स्क्रिन, स्पिकरहरू, किबोर्ड र अधिकको झुकावको साथ हामीलाई अनुकूलन गर्दछ। म बोल्छु, कसरी यो अन्यथा हुन सक्छ, आईप्याड।
यो मेरो लागि ठूलो आविष्कार हो। म व्यक्तिगत रूपमा भन्ने छु कि यो मेरो मनपर्ने एप्पल उपकरण हो। पहिलो ढोकाबाट मेरो घरमा आउने पहिलो। यो हाम्रो लागी जोखिमपूर्ण खरीदजस्तो देखिन्थ्यो तर एउटाले यसलाई सकेपछि हामीले अर्को खरीद गर्यौं। यो सब भन्दा सहज छ र प्रयोगकर्ता अनुभव महान छ, यद्यपि अब हामी आईओएसमा बढी गर्न सक्षम हुने माग गर्दछौं र हामी विश्वास गर्छौं कि सफ्टवेयरको हिसाबले यो आईफोनबाट आफूलाई अलग पारेर सुधार गर्न सक्दछ।
यी सबैको लागि, आईप्याड एकदम राम्रो छ र धेरै व्यक्तिको लागि आवश्यक हुन्छ, तर यसलाई अपडेट र शक्तिशाली राख्दै, यो धेरै वर्षसम्म रहन्छ भन्ने तथ्यको बाबजुद लामो अवधिको असम्भव नै हुन्छ। यदि तपाईंसँग old,,, वा years बर्षको पुरानो आईप्याड छ भने, तपाईं यसलाई बेच्न चाहानुहुन्छ वा यसबाट छुटकारा पाउन र नयाँ को लागी जान सक्नुहुन्छ।
मैले कुन नयाँ आईप्याड किन्नु पर्छ?
पहिलो स्थानमा, आईप्याडहरू जुन आईओएस १० मा अपडेट हुनेछन् चौथो पुस्ताबाट हुनेछ, त्यसकारण यदि तपाईंसँग आईप्याड १, २ वा have छ भने, म नयाँ सिफारिस गर्दछु, र तपाईंसँग 10. भए पनि। केहि चीजहरू, राम्रोसँग काम गर्न सुरू गर्नुहोस् र एउटा नयाँ ट्याब्लेट काममा आउन सक्दछ। त्यसोभए, के हामी एयर २ दायराका लागि अपडेट बिना वा सुधार गरिएको प्रोको लागि गयौं?
यो सबै तपाईले यसलाई दिन लाग्नु भएको प्रयोगमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं यसलाई केवल वेब ब्राउजि and र पढ्नको लागि चाहनुहुन्छ भने, हुनसक्छ तपाई एक वर्ष थप नवीकरण नगरी सक्नुहुन्छ र एप्पलले हामीलाई के प्रस्तुत गर्दछ भनेर पर्खनुहोस् भविष्यमा। तर जतिसक्दो चाँडो तपाई यसलाई अधिक प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, म एयर २ लाई सिफारिस गर्दछु यदि तपाईले बाह्य किबोर्ड वा पेन्सिल प्रयोग नगर्ने योजना बनाउनु भयो भने, र 2.।-इन्च प्रो यदि तपाई एकदम शक्तिशाली आईप्याड चाहानुहुन्छ जुन अप-टु-डेट हो र धेरै राम्रो क्षमता छ भण्डारण। यो आधारभूत G२ जीबी विकल्पको साथ सुरू हुन्छ र तपाईं १२9,7 वा २32 जीबी सम्म जान सक्नुहुन्छ। मसँग G 128 जीबी एयर २ छ र मैले यो कहिले पनि भर्ने छैन वा यसले मलाई समस्याहरू दिएको छ।
एयरको दायराका लागि अप्ट इनको साथ समस्या यो छ कि यो हाल समर्थकहरूको रूपमा सफ्टवेयरको सन्दर्भमा उही गर्छ, तर यो छिट्टै पुरानो हुन्छ, जे होस् पैसाको मूल्य धेरै राम्रो छ। म मेरो उपकरण लामो समयको लागी योजना गर्दिन। विचार नवीकरण गर्न हो जब २ बर्ष बितिसकेको छ जबदेखि मैले यो खरिद गरेको छु।
यदि मूल्य कुञ्जी हो भने उत्तम एयर
यदि तपाईं धेरै खर्च गर्न चाहनुहुन्न तर अहिले आफ्नो उपकरण नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ भने, म एयर २, G2जीबी सिफारिश गर्दछ यदि सम्भव छ भने। तपाईले राम्रो डिल र राम्रो मूल्य पाउनुहुनेछ। एप्पल स्टोर मा यो 429२eयूरो बाट छ, तर अन्य स्टोरहरूमा तपाईं यसलाई कम कम पहिलो हातको लागि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यसको सट्टा, 9,7 .679 प्रो price XNUMX XNUMX base को आधार मूल्यमा आउँदछ। हामीले आईप्याडमा प्रयोग गर्‍यौं भनेर धेरै महँगो छ, र त्यसले किबोर्ड वा स्टाइलस समावेश गर्दैन।
अन्तिम निर्णय तपाईमा निर्भर छ। यो मेरो सिफारिश हो। यदि तपाईंसँग iPad बर्ष भन्दा पुरानो आईप्याड छ भने, म तपाईंलाई अर्को क्रिसमस अघि यो नविकरण गर्न प्रोत्साहन गर्दछु। हुनसक्छ हामी देख्दछौं मुख्य भनाइमा केहि चाखलाग्दो यो सेप्टेम्बर, यद्यपि आईप्याड 9,7 .XNUMX को अफवाह वा आशा गरिएको छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » आईप्याड » यदि मँ आईप्याड २, or वा have छ, के मैले एक प्रो को लागी मेरो उपकरण नवीकरण गर्नु पर्छ?
प्राग सार्वजनिक यातायातमा जानकारीको साथ उपयुक्त शहरहरूको सूचीमा सामिल हुन्छ
एप्पलले विकासकर्ताहरूको लागि म्याकोस सिएराको चौथा बिटा सुरूवात गर्‍यो